Oromoo:(SQ ) Iddoo fedhee taahanii qabsoo gaggeessuun yeroo - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromoo:(SQ ) Iddoo fedhee taahanii qabsoo gaggeessuun yeroo
Oromoo: (SQ ) Iddoo fedhee taahanii qabsoo gaggeessuun yeroo feesiseetti murtoo sirrii fudhaachuu gaafata.
Qabsoo Bilisummaa fi abbaa biyyuummaa isaaf oromoon gaggeessaa turee keessaatti ilmaan oromoo akkaata gahee fi dandeettii isaaniitin qooda irraa fudhaachaa turaan. Jalqabumarraayyuu B/G/ Taaddasaa Birruu irraa eegalee sabboonummaan oromoo belbeluuf sabaaba kan tahee ilmaan Oromoo mana waraanaa kolooneeffattootaa keessaatti qacaaramuun barnoota fi hubaannoo haala addunyaa feesiisu argaachaa dhufuun akka sabaabatti ni kahaa. Carraa kana fayyaadamuun akkuuma gurraachonni afrikaa ollaa keenyaa waraana Addunyaa 2ffaa irraatti lolaaf deemanii muuxannoo fudhaataniin biyyaa isaanii bilisoomsaan kan Oromoos sabboonummaan Oromoo akka iddoo argaatu taasiisaniiru.
Har’aas yeroo gaaffii waggootaaf deebii malee turee xumuura itti gochuuf jirruu kanaatti walirraatti qiyyaafachuu caala Tokkummaadhaan dhaabbannee mooraa Oromummaa fi hafuura Oromummaa gabbisuun waan fardiiti. Yeroo kanaatti Habashoonni waggootaaf nu dhiitaa turaanif hireef mirgi keenya jalqaaba harka isaaniitti mulqaamne wal ijaaranii nutti yoo as qiyyaafataan argiina malee wal irraatti yeroo dhukaasan argaa hin jirruu.
Nuti WBOn qabsoo gaggeessinu keessatti miidhama ilma Oromoo hambisuuf ilma Oromoo hacuuccaaf daraarama jalaa bahee akka namaatti mirgii isaa kabaajamee eenyuniyyuu wal qixaa ilaalamu arguun Hawwii keenya. Haa tahuutii garuu Mootummaan biyyaa bulchuu kun Oromoo xiqqeessuu karoora isaa jalqabaa kan godhaate ilmaanuuma Oromoo akka gaachanaatti fayyadamuun dahaannoo godhaatee rasaasni isaaniif dhukaafamuu addaa fi qoma ijoollee Oromootiin qorriisiifatee umurii Aangoo isaa dheereffataa jiraa. Kana hubaachuun ilmaan Oromoo Poolisii Idilee, poolisii federaalaa, raayyaa ittisa biyyaa, milishaa fi caasaa nageenyaa biyyaa tanaa keessa jirtaan qawween isiin qabaattan kan saba keessaniif dahoo fi gaachana ittin tahuuf irbuu seentanii hidhaattan malee teessoo mootummaa abbaa irree tiksuuf akka hin taane hubaachuu qabduu. Kana madaala keessa galchuunis ilmaan oromoo hidhaannoo mootummaa kana hidhaattanii jirtaan Ijoollee Oromoo irraatti akka qawwee hidhaattan hin dhukaasne isiiniin jennaa.
Akka fedhees tahuu haqnii fi dhugaan Oromoo dhokaataa turuu fi caalatti immoo yeroo kana awwaalamaa jiraachuu eenyuuma jalaayyuu dhokaataa mitii. Waraanni Bilisummaa Oromoodhaa WBOnis xaxaalee deemaa turaan hunda hubachuun gaaffiin bu’uuraa saba Oromoo kan furmaata waaraa argachuu danda’uu qabsoo hidhaannootiin qofaa tahuu amanuun eejjaannoo isaa ganamaatti ciichee qabsoo isaa finiinsaa jiraa. Qabsoon gaggeesiinu kan saba Oromooti malee kan fedhii fi faayida dhuunfaa qeenxeef mitii. Kanaafuu yeroo kanaatti ilmaan Oromoo Raayyaa ittiisa Biyyaa, poolisii Idilee, poolisii federaalaa, milishaa fi caasaa nageenyaa biyyaattii keessaa jirtaan garaa mooraa qabsoo Oromootti seenun qabsoo sabaaf humna akka taatan Ajaajni olaanaan WBOdha waamicha isiinif dhiyeessa. Qawween isiin hidhaattan kan qabsoo oromoof humna tahuu qabuu waan taheef qawwee fi hidhaannoo keessan waliin gara mooraa qabsootti akka dhuftan jennaa. Akkasumas mooraan qabsoo bilisummaa oromoo yeroo kam caalayyuu isiin simaachuuf qophii tahuu hubaachiisna.
Ajaaja olaanaa Waraana Bilisummaa Oromoo
OMN: Oolmaa Oromiyaa (Onk 27, 2019)
#ARAMAAn nuti beeknu biyyaaf lafa oromiyaa irratti oromoo qulqulluu facaafanne, garuu immoo lafti keenya kan biroo biqilchiti taanaan aramaa dha.
Hundaafu barreefama kana mirgaa gara bitaattii dubbisaa.